Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Fiteny
Pejy 3 amin_ny 34
Tantara mikasika ny Fiteny
18 Mey 2019
Aposak'ilay [doka] sary an-tsaina ny vehivavy iray maniry ny ihinanana ny tenany tahaka ny tofu.
12 Mey 2019
29 Avrily 2019
Tantara iray avy amin'ny Global Voices manampy ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana fandikanteny amin'ny fanehoana ny firehetampony ho an'ny teny Tseky
Mpanoratra Filip Noubel · Afrika Mainty
Manolotra loka ho an'ny mpandresy manerantany tamin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena nampiasàna tantara iray an'ny GV ho adika amin'ny teny Tseky
16 Avrily 2019
Mpanoratra Tomomi Sasaki · Azia Atsinanana
Mpanoratra Tolkun · Azia Afovoany sy Kaokazy
12 Avrily 2019
“Tsy maty irery ny fiteny, fa vonoina mihitsy”: araka ny hita amin'ny fanjavonan'ireo teny indizeny ao Meksika
Mpanoratra Yásnaya Elena Aguilar Gil · Meksika
Tsy maty ny teninay, vonoina kosa izy. Namafa azy ireo ny fanjakana Meksikana. Ny fomba fihevitra tokana, ny kolontsaina tokana, ny fanjakana tokana, ny rano amin'ny anarany no manafoana azy ireo.
DigiGlot Newsletter: Mitondra vaovao tsara sy vaovao ratsy ho an'ny fiteny an-dalampahaverezana sy ny vitsy an'isa ny zava-baovao Fahaizana Artifisialy
Mpanoratra Rising Voices · Aostralia
Ny DigiGlot Newsletter dia famoahana iombonana mivoaka indroa isan-kerinandro ary mitatitra ny fomba ampidirana ireo fiarahamonin'ny fiteny vitsy an'isa sy an-dalampahaverezana ao anatin'ny teknolojia mba hanova ny tontolon'ny aterineto.
Mpanoratra Luis Flores · Antsafa
Andao isika hamantatra bebe kokoa momba an'i Misael Hernández Mendoza, mampiatrano mitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 4-11 marsa 2019 ao amin'ny fanentanana amin'ny fampitam-baovaom-piarahamonina vaovao mifantoka amin'ny fimaroam-piteny antserasera.
Sarimiaina fohy Dijaawa Wotunnöi manampy amin'ny famelomana indray ny fiteny Yekuana
Mpanoratra Minerva Vitti · Amerika Latina
Yekuanas maro no nandray anjara tamin'ny tetikasa amin'ny maha-mpandika teny sy mpikaroka azy ireo, sady nandray anjara ihany koa tamin'ny fanomezana feo ireo olona nampiainina ao anatin'ny filma.
05 Marsa 2019
Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin-drazana ny 21 Febroary lasa teo ary ho fankalazana izany, namoaka sy nizara tantara foronony voalohany amin'ny endrin-tsotra teny Mro ho an'ireo foko monina any amin'ny faritra sisintany eo anelanelan'i Myanmar, Bangladesh sy India ny fikambanana iray mpanao asa soa.